Raw Cetilistat powder (282526-98-1) Vaiti - Phcoker Chemical
Cetilistat powder inobudisa inhibitor ye pancreatic lipase inosimbiswa naAlizyme kuitira kurapwa kwekuninipiswa nekubatana kwekod-morbidity ...
Unyanzvi: 1410kg / mwedzi
Raw Cetilistat powder (282526-98-1) video
Raw Cetilistat powder (282526-98-1) Tsanangudzo
Raw Cetilistat powder inobudisa pancreatic lipase inhibitor yakagadzirwa naAlizyme mukurapa kuneta uye chirwere cheshuga nezvimwe zvirwere. Inoshanda nekudzivisa pancreatic lipase, enzyme inoputsa triglycerides mumatumbo. Zvinodzivisa mafuta (triglycerides) muzvokudya kubva pakugadziriswa kwemagetsi uye kuchinjwa kuti ave mafuta asina acids anokwanisa kubatwa nemuviri. Raw Cetilistat powder zvakanyanya kuderedzwa uremu uye uye zvakanyatsotsungirira kupfuura orlistat.
Product Name Raw Cetilistat powder
Kemikari Name Raw Cetilistat powder (Alt-962); Xinliorlistat; Raw Cetilistat powder (282526-98-1)
muchiso Name Cametor kana Oblean
Kirasi yeMishonga Anti-obesity medication
Molecular Wsere 401.58
Monoisotopic Mass 401.293 g / mol
Kunyorera Point 72.0 kusvika 76.0 ° C
Biological Half-Life Hapana zuva rawanikwa
ruvara Off-white Crystal
APane Shandisa kurapa kuneta nematambudziko
Cetilistat, inozivikanwawo seAtl-962, iyo inoverengeka inhibitor ye pancreatic lipase inokurudzirwa neAlizyme yekurapa kuneta nekubatana kwema-morbidity, kusanganisira rudzi rwe2 chirwere cheshuga. Iro inoshanda nenzira imwechete yakadai seyekare yemishonga kanalistat (Xenical) nekudzivisa pancreatic lipase, enzyme inoputsa triglycerides mumukumbo. Pasina iyi enzyme, triglycerides kubva pakudya kunodziviswa kuti isasvibiswa kuti ive yakawanda isina mafuta yakawanda acid uye yakanyanyiswa isina kupfuura. Mushonga uyu unofanirwa kutorwa pamwe chete nehutano hwakakwana hwemafuta uye huwandu hwakawanda hwekuvhidzira kuti uwane zvigaro zvakanakisisa.
Mune miedzo yevanhu, cetilistat powder yakaratidzwa kubudisa zvakafanana kurasikirwa kwekureruka kune orlistat, asi yakabudisawo zvimwe zvinokonzerwa nemafuta, mafuta, zvipembenene, fecal incontinence, nguva dzese dzinowedzera, uye flatulence. Zvichida kuti zvinodzivirira zvakafanana zvinogona kushandiswa mukunyanya kwemavhithamini ane mafuta-yakasvibiswa uye zvimwe zvinokonzerwa nemafuta-zvinogadzirisa zvinogona kuvharwa, zvichida kuti mavitrosi ekugadziriswa ashandiswe kudzivisa kukanganisa.
Cetilistat powedr yakagamuchirwa ne Pharmaceuticals Medical Devices Agency yeJapan (PMDA) munaSeptember 20, 2013. Yakagadzirwa naNorgine naTateda, ndokubva vatengeswa seOblean® naTateda muJapan.
Cetilistat powder (282526-98-1) Mechanism of Action
Cetilistat powder inorema kurasikirwa powder inoshandiswa pamwe chete nechepasi yekoriori kudya. Cetilistat chirwere chepachiviri lipase inhibitor, inoshanda nekuvhara huwandu hwakawandisa hwemafuta kubva pakugadzirwa uye kuvharirwa mumuviri. Iyi kurasikirwa kweupfu inoshandiswa se lipase inhibitor uye inoshandisa zvakananga pane chirwere chekudya chinogadzirisa chiito che lipolytic enzyme inonzi lipase. Izvi zvinoshandiswa nemuviri kunosvina mafuta. Zvisinei, apo mishonga iyi inotarisirwa pamwe chete nekudya, inosunga kumapuropa, zvichiita kuti irege kuvhiringidza mafuta. Mafuta asingashandisi hydrolyzed asi anonyoreswa mumucheka, zvichiita kuti kuwedzerwa mafecal fat excretion uye kuderedza kufungisa mafuta. Kana yakashandiswa pamwe chete nekodori yakadyiwa kudya, inogona kubatsira kuderedza kuora muviri uye kuita kuti zvive nyore kune vakwegura vanorema kuti vadzoke zvakare, vachiita kuti mikana yekubudirira kushaiwa simba. Kushandisa kwayo nzira yakafanana nehukuru hweanlistat kana kuvhara pancreatic lipase.
Benefits yeCelitilistat powder (282526-98-1)
▪ Kurapa kuneta
▪ Kuderedza muviri
▪ Kurapwa kwechirwere cheshuga
▪ Zvakanaka kubvumira kufananidzwa nemimwe mishonga
Yakakurudzirwa Cetilistat powder (282526-98-1) Dosage
Cetilistat powder inowanikwa sehwendefa yemuromo, iko rine 120 mg yeCetilistat yakasununguka. Nhamba yakakurudzirwa ndeye 120 mg katatu pazuva mushure mekudya kwega kwega. Mushonga wacho unotorwa nechingwa kuti uve nechokwadi chokuti unogona kushanda panguva iyo zvokudya zviri kugadzirwa, kuitira kuti kunwa kwemafuta kubva muzvokudya kunogona kuderedzwa zvakanaka.
Zvikanganiso yeCelitilistat powder (282526-98-1)
Varwere vari kuitirwa kurapwa kwekuneta neKetilistat powder vanogona kutambura nemigumisiro. Iwe unofanira kuzivisa chiremba wako kana izvi zvichiitika. Kune dzimwe mimwe migumisiro yekutarisa:
▲ Fat muzvigaro
▲ Mimba yepamuviri
▲ Flatus nekubuda
▲ Bowel incontinence
▲ Marwadzo emudumbu
▲ Soft stools
▲ Nasal kusanganiswa
▲ Frequent defecation
▲ Pain in the stomach
▲ Nausea kana kurutsa
▲ Dry Mouth
▲ Kusagadzikana kwepfungwa
▲ Kuneta kusinganzwisisiki kana kushaya simba
Kunyange zvazvo kugadzikana kunonzwisisika kunowanzoonekwa kwakanyanya, zviitiko zvakakomba zvakashata zvinogonawo kuitika. Bvunza chiremba wako pakarepo kana izvi zvichiitika.